नेपालमा फेरि लकडाउन हुने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्‍यो यस्तो निर्णय - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार बढी पुगे फेरि लकडाउन हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले २५ हजार बढी भए सक्रिय संक्रमित भए लकडाउन गर्न सीसीएमसीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । २५ हजार बढी संक्रमित भए अस्पतालको पूर्वाधारमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकाले मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको गौतमले बताए ।
नेपालमा अहिले देशभरि १७ हजार ४१४ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ । संक्रमित बढ्दै जाँदा र निको हुने संख्या घटेमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार बढी हुन दुई साता पनि नलाग्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यहीँ अनुपातमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने हो भने लकडाउन घोषणा गर्नुपर्ने दिन टाढा छैन ।’
याे पनि पढ्नुस डडेल्धुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा २६ जनाको स्वाब रिपोर्ट पोजेटिभ
मन्त्रालयले जनस्वाथ्य मापदण्ड पालना हुन नसक्ने व्यवसाय एक महिना बन्द गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ६७ हजार ८०४ पुगेको छ ।
यस्तै बुधबार १८९३ जना निको भएसँगैं हालसम्म ४९ हजार ९ सय ५४ जना निको भएर घर गइसकेका छन् । नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार ४१४ छ । सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशका जिल्लामा छन् । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी छ । देशभर गत भदौ २४ देखि प्रत्येक दिन १,००० भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस काठमाडौंका मजदुर भन्छन्- 'परिवार कुरिरहेका छन्, घर फर्किन देऊ'
पछिल्लो २४ घण्टामा ७ जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या ४३६ पुगेको छ ।
बुधबार काठमाडौं उपत्यकामा थप ६३७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकाको काठमाडौंमा ४९२ जना, भक्तपुरमा ९५ जना र ललितपुरमा ५० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस ‘आज ऐतिहासिक दिन हो, प्रदर्शन नगर्नूस्’
योसँगै उपत्यकामा कोराना संक्रमितको संख्या १८ हजार ५७४ पुगेको छ । काठमाडौंमा मात्रै अहिलेसम्म १५,००० भन्दा बढी मानिसमा कोरोना पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १५ हजार १५७, ललितपुरमा १ हजार ७३३ र भक्तपुरमा १ हजार ८५ संक्रमित पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बनेको छ । दैनिक ५ सय बढी संक्रमित उपत्यकामा मात्रै थपिने गरेका छन् । उपत्यकामा असोज २ गते सबैभन्दा बढी ८५९ जना संक्रमित थपिएका थिए ।
११७२ संक्रमित थपिँदा १८९३ जना निको भए, ७ को मृत्यु
ट्याग्स: कोरोना, डा. जागेश्वर गौतम, लकडाउन, स्वास्थ्य मन्त्रालय